Touch ID အတွက်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ကို Apple မှတ်ပုံတင် Gadget သတင်း
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Apple, မိုဘိုင်း, NOTICIAS
နည်းပညာအသစ်များ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု ကြောင်းစမတ်ဖုန်းအားဖြင့်နည်းနည်းအကောင်အထည်ဖော် ဆက်လက်ကြီးထွားနေသည်။ Android သုံးစွဲသူအရေအတွက်မှာနှစ်အတော်ကြာတဲ့အထိ ဦး ဆောင်ခဲ့သူပါ။ Apple က iPhone ကိုပိုပြီးပြည့်စုံအောင်လုပ်ဖို့အားမပေးပါဘူး ဗားရှင်းအပြီးဗားရှင်း။ ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခု သံသယမရှိဘဲနှင့်သုံးစွဲသူများကိုယ်တိုင်၏အဆိုအရ မကြာသေးမီက၎င်း၏မရှိခြင်းအားဖြင့်သိသာသည်.
ပရိုဆက်ဆာ၊ ဆော့ဖ်ဝဲနှင့်ကင်မရာတို့၏တိုးတက်မှုများအပြင် ထူးခြားသောသတင်းမရှိဘဲ iPhone ဗားရှင်းများစွာရှိပြီးဖြစ်သည်။ မနေ့ကအင်္ဂါနေ့ ၁၇ နေ့ကျွန်တော်တို့ Cupertino ကနေသိနိုင်ပါပြီ မျက်နှာပြင်ပေါ်တွင် Touch ID ၏ပေါင်းစည်းမှုနှင့်ပတ်သက်သောမူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်သေးသော်လည်းနောင်အနာဂတ် iPhone ဗားရှင်းများတွင်တိုးတက်မှုအနည်းငယ်ရရှိနိုင်သည်။
1 Face ID သည်ပထမဆုံးအကြိမ် Touch ID နှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်သည်
2 လာမည့် iPhone ပေါ်ရှိလက်ဗွေဖတ်ကိရိယာ?
Face ID သည်ပထမဆုံးအကြိမ် Touch ID နှင့်အတူယှဉ်တွဲနေထိုင်နိုင်သည်
၏အိုင်ဖုန်းအပေါ်ဖျက်မှုကတည်းက မှတ်မိခြင်းနှင့်ဒဏ္myာရီ «အိမ်»ခလုတ်, iPhone X မှဗားရှင်း သူတို့လက်ဗွေအသိအမှတ်ပြုနည်းပညာကိုရပ်တန့်။ iPhone 8 နှင့်နောက်ပိုင်းတွင်ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ဆဲဖြစ်သောလုံခြုံရေးစနစ်။ စမတ်ဖုန်းအသစ်တွေနဲ့မျက်နှာပြင်တစ်ခုလုံးမှာ Touch ID ကိုပေါင်းစပ်ဖို့နေရာမရှိဘူး.
လက်ဗွေဖတ်စက်ကိုဖယ်ရှားရန်ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အိုင်ဖုန်းကိုမလုံခြုံစေတော့ပါ။ အဲဒီအစားကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါကဗားရှင်းအသစ်များရှိလိမ့်မည် မျက်နှာအသိအမှတ်ပြုမှုနည်းပညာကိုခေါ် မျက်နှာ ID ကို။ လက်ရှိ Apple ကကျော်လွှားရန် "မဖြစ်နိုင်" အောင်လုပ်ရန်သိသိသာသာတိုးတက်ခဲ့သည် ငါတို့ကိုယ်ပိုင်မျက်နှာထက်မှတ်မိဖို့ပိုလုံခြုံပြီးပိုလွယ်တဲ့စကားဝှက်ရှိသလား။
တကယ်တော့ကြောင်းဖြစ်ပါတယ် Face ID ကအရမ်းကြိုက်တယ်, ငါတို့ကကြီးစွာသောတိုးတက်မှုဖြစ်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်, ပထမ ဦး ဆုံးအခိုက်အမှစ။ သူတွေကိုရှိပါတယ် သူတို့လက်ဗွေစာဖတ်သူကိုလွဲချော်။ အလင်းနည်းသောသို့မဟုတ်အရိပ်နိမ့်သောအခြေအနေများတွင်၊ လက်ဗွေဖတ်စက်နှင့်မဖြစ်သည့်အရာ။ ထို့ကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းက Apple က Touch ID ကို screen ပေါ်မှာပေါင်းစပ်ဖို့လုပ်ဆောင်နေသည်.
လာမည့် iPhone ပေါ်ရှိလက်ဗွေဖတ်ကိရိယာ?
ကျနော်တို့ဘယ်လိုနှစ်ပေါင်းများစွာကြည့်ရှုနိုင်ခဲ့ပါပြီ အက်ပဲလ်သည်လက်ရှိနည်းပညာများကိုချေးယူပြီးယင်းတို့ကိုကိုယ်ပိုင်တိုးတက်အောင်လုပ်သည်။ ဤသည်မှာရှင်းလင်းသောဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Face ID ကိုယ်တိုင်။ Facial အသိအမှတ်ပြုမှုသည် iPhone X. Y တွင် Apple ကအသုံးမပြုခင်ကိရိယာများတွင်အသုံးပြုပြီးဖြစ်သည် အဲဒါကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့တယ် ငါတို့မျက်နှာ၏ဓာတ်ပုံရိုက်ရုံမျှသာမဟုတ်ဘဲ ငါတို့မျက်နှာ၏ပြည့်စုံမြေပုံဖျော်ဖြေ 180º x ကို180ºအထိ။
Touch ID မျက်နှာပြင်တွင်ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်အတူတူဖြစ်လိမ့်မည်နည်း Samsung S10 ကဲ့သို့ကိရိယာများသည်၎င်းတွင်မည်သို့ပါဝင်သည်ကိုယခုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်နိုင်သည်။ အတော်လေးအပြုသဘောဆောင်တဲ့လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အတူပေမယ့်, စာဖတ်ခြင်း device ကိုတစ် ဦး သတ်သတ်မှတ်မှတ်areaရိယာကန့်သတ်ထားသည်။ တချို့ကသတင်းရင်းမြစ်ကြောင်းဆိုကြသည် နောက် iPhone သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဗွေကိုမည်သည့်မျက်နှာပြင်တွင်မဆိုဖတ်နိုင်လိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ အက်ပဲလ်သည်၎င်း၏မူပိုင်ခွင့်များနှင့်ပတ်သက်သည့်အချက်အလက်များကိုမည်သည့်အခါမျှထုတ်ဖော်ခြင်းမရှိသောကြောင့် iPhone 12 သည်အမှန်တကယ်ဖြစ်လာသည်အထိစောင့်ဆိုင်းရမည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Gadget သတင်း » Apple » Touch ID အတွက်မူပိုင်ခွင့်မှတ်ပုံတင်ကိုအက်ပဲလ်ကမှတ်ပုံတင်